rafozan-doza | Oktobra 2009
BOMBS'09... Nominate Tritriva!!
Efa fantatry tsika rehetra angamba ny fisian'ny BOMBS 2009 ity. Fifaninana momba ny blaogy mendrika indrindra eto @ blaogasifera. Ny voalohan-teny ngamba dia ny hoe faly aho, tena faly. Zavatra tsara mintsy ny fisian'ny fifaninana toy izao mba hamporisihana antsika tsirairay avy hamahana bolongana.Tena hita fa kamokamo tokoa manko isika t@ ity taona ity. Asa na noho ny krizy politika sy ekonomika eto @ firenena nga. En tt cas, tena mahavelombolo tokoa ny fahitana fa manomboka nifoha ary miverina mitoraka tsikelikely ireo resin-tory elabe...
Ny teny hoe bombs koa dia tena manaitra avy hatrany. Evidawazy fa tsy baomba, baomba raisina litteralement ilay izy fa ny hevitra ambadika hoe mipoaka be ee. Otran'ilay fiteny hoe bomba be koa iny sipa iny izany an. Na dia otran'ny sarina baomba hipoaka izany aza ny @ ilay logo dia izay hevitra izay no tiana hiantsampy any antsaintsika. Amiko manokana aloha tsy bomba mihintsy io fa zavatra boribory be misy zavatra boribory kely, hidiran'ny zavatra lavalava, izay manjelanjelatra tokoa.
Eto aho dia mamporisika antsika tsirairay avy handray anjara. Mba ampidiro "nominations" ny blaoginareo. Izy ity moa dia lalao sy fifaninana ka tsy maintsy misy mandresy sy hoe resy. Kanefa kosa hoy aho hoe mahazo loka daholo izay mandray anjara rehetra. Satria nahoana ozy nareo? rehefa "nominE" ao ny blaoginareo dia mba hitan'ny olona. Misy blaogy mbola tsy hitako mintsy izao tao, lasa hitako tampoka, ary mety ho harahiko mintsy aza ny rss-ny... ka hoy aho hoe, ho antsika izay nanahy mafy t@ ilay hoe inona no manakana anao tsy hiblaogy, dia hoe ka tsy misy mamaky akory aza ka. Tonga izao ny andro fanararaotana, iza no mahita, mety mampitombo ny audiences ny fandraisanao anjara. Jereo eto ny lisitry ny efa voa-nominE, araho isaky ny sokajiny...
Dia izao koa e, na tsy ho nomine-nareo aza ny blaoginareo, dia nominer-o izay hitanareo fa tsara. Mba ho firaisan-kina @ blaogasifera iray manotolo ee. Azo atao tsara mihintsy ny manao propagandy kely hoan'ny blaogin'ny olon-kafa. Mbola eo ampikarakarana ny dikan-teny malagasy ny fitsipi-dalao moa ny mpiandraikitra fa hoy aho hoe ny tena zava-dehibe tsara fantatry isika angamba dia ny hoe ireo 5 voalohany mahazo nominations betsaka indrindra no miditra ny any @ dingana famaranana, ho tsarain'ny mpitsara. Mazotoa mi-nominer izay tena tianareo satria mampitombo ny sansa-ny izany. Manana zo hifidy in-5 ny olona iray (IP + email no marimarina kokoa). Ka lanjalanjao tsara. Ny ahy izao hataoko hifidianana olona 5 be zao. Izay ho atolotro tsikelikely eto. Otran'izao:
** allo, allo, nominer-o i Tritriva re ol o o o **
Ny nifidianako azy?
mamirapiratra be ny blaoginy. Hitanareo, otran'le hoe sahan'i Edena e. Vao miditra ao enao dia faly avy hatrany... happy place...
Tandremo sao dia misy hanao zalozy indray eto an... tsara doly ny blaogintsika rehetra fa rehefa tsy maintsy asiana safidy kely dia mba safidiko izy ee... en plus, izy tena cool be mintsiny. Tsy maintsy manome bisou sy lullaby isaky alohan'ny hatory isan'andro isan'andro.
Tsy dia hitako loatra anefa ny sokajy tokony ampidirana azy... ilay hoe coup de coeur no tena mety aminy kanefa tsy tafiditra @ iny moa raha tsy miditra sokajy @ efa voalaza aloha. Nisalasala ah @ hoe tanora gasy ve sa vita gasy no mety kokoa dia farany nataoko ao @ ilay vita gasy izy. Io dia mikasika an'ireo blaogy misy ny resaka kolotoraly sy sosialy mikasika an'i Madagasikara. Ny blaoginy moa rehefa jerena dia misy tonokalo, fialam-boly, torohevitra pratika, hirahira sy sarisary (misy mifandraika @ Madagasikara ny sasany), manakaiky kokoa noho ilay hoe tanora malagasy ee.
Mbola misy olona efatra ho nominer-ko izay ho lazaina tsirairay eto @ manaraka. Tsy ao anatin'izany aloha i baby fialam-boly na dia nisy nanolotra tao aza. Satria za moa tsy dia tena hoe hifaninana serieux be, ary efa hoe tsy handray anjara mintsy aza aho mais bon... tsy azoko ferana ny zo an'ny olona ( quoi que aza tratrako any ankodimirana an ) sady araka ny efa voalazako teo hoe mety mba hitombo ny mpitsidika no sady hoe lalaontsika rehetra izy ity e.
bon weekend doly,
ps: miala tsiny raha toa ka somary lavalava ny resaka fa miezaka ny manatratra an'ilay tanjona 2009 iray izay ah hoe hitsako an'i jentl @ halavan'ny lahatsoratra ... vakio miadana. Paragraphy iray isan'andro
10/24,2009 Sokajy Dago